PEACEFUL PA: June 2016
PRAYER by Dr. John R. Rice- Chapter 04
အဖြေက ရရှိခြင်း - THE ANSWER TO PRAYER IS RECEIVING
“ဆုတောင်းသမျှတို့ကို ဘုရားသခင့် ထံတော်မှ ရကြ၏။” - ၁ ယော ၃း ၂၂
“သားသည် မုန့်ကို တောင်းလျှင် မိမိသားအား ကျောက်ကို ပေးမည့်သူ၊ ငါးကို တောင်းလျှင် မြွေကို ပေးမည့်သူ တစုံတယောက်မျှ သင်တို့တွင် ရှိသလော။”- မဿဲ ၇း ၉၊ ၁၀
ဆုတောင်းခြင်းက တောင်းတာ ဆိုရင်၊ အဖြေက ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာတွေက သူတို့ တောင်းလို့ မရရင်၊ ယုံကြည်ခြင်း အားနည်းတာကို ဆင်ခြေပေးတတ်တယ်။ “ဘုရားက အဖြေ ပေးပုံ ၃ မျိုး ရှိတယ်။ “Yes,” or “No,” or “Wait awhile.” ခဏစောင့်” လို့ ပြောတယ်” လို့ ဆိုကြတယ်။
ဒါက ခရစ်ယာန်ဆိုတာ ဘုရားအလိုတော် ဝန်ခံရမယ်၊ ဘုရားပေးသမျှနဲ့ ကြေနပ် ရောင့်ရဲ ရမယ် ဆိုတဲ့ သဘောပါ။ ဒါပေမယ့် ဆုတောင်းခြင်းကို ကျမ်းစာက ဒီလို မသွန်သင်ပါဘူး။ ဒါက ဆုတောင်းခြင်းဟာ နက်နဲတယ်၊ ဘုရားအလိုတော် မသိနိုင်ဘူး။မျာျးား ဆုတောင်းဖို့ မလိုဘူး။ အလိုတော် အတိုင်းပေါ့။ ကိုယ့်လိုအင်တွေ မရောနဲ့။ ဘာ ဆုတောင်းစရာ လိုသလဲ? လို့ ပြောသလို ဖြစ်နေတယ်။ ဆုတောင်းတဲ့ အလုပ်ကို မရေမရာ၊ မသေမချာ အလုပ်လို့ ထင်စေရင် ကျမ်းစာနဲ့ လွဲနေပါပြီ။
စဉ်းစာဥာဏ်ရှိသူတိုင်းဟာ ကိုယ့်ဘဝမှာ အစီအစဉ်မကျတာတွေကို ဘယ်လို ရောက်ရဲနိုင်ပါ့မလဲ? ကားမောင်းပြီး ဆီဆိုင်ကို သွားတယ် ဆိုပါစို့။ “၁၀ ဂါလံ ပေးပါ။” လို့ ပြောလိုက်မယ်။ အတိအကျ ထည့်ပေးတာပဲ လိုချင်တာပေါ့။ ဆိုင်ဝန်ထမ်းက “No, sorry! ခင်ဗျားမှာ ဆီမလိုပါဘူး။ (သို့) တချို့ဆရာတွေ ပြောသလို - “ခဏစောင့်နော်။ ထိုက်တန်လား၊ မတန်လား ကြည့်ရဦးမယ်” လို့ ပြောမယ်ဆိုပါစို့။ (သို့) ဆီမဟုတ်ဘဲ၊ ဆပ်ပြာမြှုပ်တွေ၊ အရက်တွေ၊ ရွံ့တွေ လာထည့်မယ် ဆိုပါစို့။ “Yes,” or “No,” or “Wait awhile” စောင့်ပါဥိး ဆိုတာ တကယ် အဓိပ္ပါယ် မရှိတာပါ။
ယောင်္ကျားလေးက မိန်းကလေးကို နှစ်သက်တယ်။ မိန်းကလေးလည်း စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ ထင်လို့ လက်ထက်ခွင့် တောင်းတယ်။ မိန်းကလေးက No တဲ့။ ကောင်လေးက အဖြေရတယ် ဆိုပြီး ပျော်နေမလား? ဒိလိုပဲ ဘုရားထံမှ ဘာမှ မရဘဲ ဘယ်လို ပျော်နိုင်မလဲ။
I. အဖြေဟာ ရတာပဲလို့ ကျမ်းစာက ဆိုတယ်။
ကိုယ်တောင်းတာကို ရတာဟာ ဆုတောင်းခြင်းရဲ့ အဖြေပဲ။
“တောင်းကြလော့။ တောင်းလျှင်ရမည်။ ရှာကြလော့။ ရှာလျှင် တွေ့မည်။ တံခါးကို ခေါက်ကြလော့။ ခေါက်လျှင် ဖွင့်မည်။ တောင်းသောသူမည်သည်ကား ရ၏။ ရှာသောသူလည်း တွေ့၏။ ခေါက်သောသူအားလည်း တံခါးကို ဖွင့်၏”
ယောဟန် ၁၆း ၂၄ မှာ - “တောင်းကြလော့။ ထိုသို့ တောင်းလျှင် ရကြလိမ့်မည်။”
ယာကုပ် ၄း ၂ မှာ - “မရကြ။ အကြောင်းမူကား ဆုမတောင်းဘဲ နေကြ၏။”
ဆုတောင်းခြင်းက တောင်းတာပဲ ဆိုရင်၊ အဖြေက ရတာပါပဲ။
Dr. Charles A. Blanchard က သူရဲ့ Getting Things From God ဆိုတဲ့ စာအုပ်ရဲ့ “What Is an Answer to Prayer?” ဆိုတဲ့ အခန်းမှာ -
“ကိုယ်လိုတိုင်း ဘုရားက ပေးမှာ မဟုတ်ဘူး လို့ ပြောတတ်ကြတယ်။ ပေးတဲ့ပုံက Yes လို့ ပြောတာရှိသလို၊ No လို့ ပြောတာလည်း ရှိတယ်။ No ဆိုတာလည်း Yes လို အဖြေ ပေးတာပါပဲ လို့ ဆိုတတ်တယ်။ ဒီလို သွန်သင်တာ မကောင်းပါဘူး။”
ဒါကို Dr. Blanchard က ဥပမာ ပေးတယ်။ အမေက ကလေးရဲ့ အသက်အတွက် ဆုတောင်းနေတယ်။ ဆုတောင်းသံ ဘုရား လက်မခံဘူး။ ကလေး သေသွားတယ်။ လုပ်ငန်းရှင် တယောက် ခက်ခဲနေလို့ ဆုတောင်းတယ်။ ဘုရားအလိုတော် မရှိလို့ စီးပွါးပျက်သွားတယ်။ စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းခံနေရတဲ့ လူတယောက် ဆုတောင်းတယ်။ တောင်းပုံမမှန်လို့ အရှက်ကြုံရပြီး မိသားစု ပြိုကွဲ သွားတယ်။ အသင်းတော်ရှေ့မှာ အရှက်ကွဲတယ်။ အသိုင်းအဝိုင်းကြားမှာ ကိုယ်ကျင့် ပျက်ရတယ်။ ဒီလိုလူတွေအတွက် ဆရာတွေက ဖြေတတ်ပါတယ်။ ဘုရားက ဆုတောင်းတာကို မငြင်းပယ်ပါဘူး။ အဖြေလည်း ပေးပါတယ်။ No လို့ ပေးခဲ့တာပါ လို့ ပြောတတ်ကြတယ်။ Dr. Blanchard ကတော့ ….
“ဒီလို သွန်သင်တာကို ကျွန်တော်တော့ မယုံဘူး။ ကြေကွဲနေတဲ့ မိခင်ကို နှစ်သိမ့်မှု မပေးနိုင်ဘူး။
“အကူအညီလည်း မဖြစ်ဘူး။ ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပင် ဝေးစေနိုင်ပါတယ်။”
Dr. Blanchard က ….
ကိုယ်တောင်းတာ ရမှ အဖြေဖြစ်မှာပေါ့။ နေမကောင်းလို့ ဆုတောင်းတယ်။ ကျန်းမာသွားတယ်။ ငွေကြေးအတွက် ဆုတောင်းတယ်။ ပြေလည်သွားတယ်။ မကောင်းမှုကို ရှေင်ချင်လို့ ဆုတောင်းတယ်။ အောင်မြင်သွားတယ်။ လိုတာတောင်းလို့ ရတာ အဖြေပါပဲ။ No ဆိုတာ အဖြေမှ မဟုတ်ဘဲ။ ဘုရားအဖြေက Yes ပါ။”
“အဖြေဆိုတာ ရတာပဲ ဖြစ်ရပါမယ်။ Yes or No ဖြစ်မယ်။ တခြား တခုခု ရမယ်ဆိုတာဟာ တောင့်တနေတဲ့ စိတ်နှလုံးကို အလေးမထားသလို ဖြစ်နေပါတယ်။”
Dr. Blanchard ပြောတာ မှန်တယ်။ အဖြေက Yes ပဲ ဖြစ်ရမယ်။ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် တောင်းတဲ့သူဟာ Yes လို့ အဖြေရသင့်ပါတယ်။ မရရင် ဘာကြောင့် မရသလဲ ဆန်းစစ်သင့်ပါတယ်။ ကျမ်းစာနဲ့ ချိန်ထိုး၊ ဝိညာဉ်တော် လမ်းပြမှု ခံယူပြီး အဖြေရှာရမယ်။
II. Yes ဆိုတဲ့အဖြေရဖို့ အလိုတော်နဲ့အညီ ဘယ်လို ဆုတောင်းမလဲ။
အများစုက ဆုတောင်းရင် ဘာမှ မရတတ်ကြဘူး။ ရဖို့လည်း မမြော်လင့်ကြဘူး။ မရေမရာ တောင်းကြတယ်။ တိတိကျကျ မတောင်းဘူး။ ရဖို့ တောင်းကြတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါကြောင့်လည်း အလိုတော်ရှိရင်လို့ တောင်းနေကြတာပေါ့။ အလိုတော်ရှိရင် နိုးထစေပါ၊ ခရစ်တော်က ချစ်လို့ အသေခံပေးခဲ့တဲ့ အပြစ်သားတွေလည်း အလိုတော်ရှိရင် ကယ်တင်ပါ၊ ဘုရားက ပေးချင်ပါလျက်နဲ့ အလိုတော်ရှိရင် ပေးပါလို့ တောင်းတတ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါက ဘုရားအလိုတော် ဝန်ခံနေတာ မဟုတ်ဘူး။ မယုံကြည်တာကို ပြနေတာ။ အဖြေရမယ်မှန်း မသိဘဲ ဆုတောင်းရင်း အမှောင်မှာ လဲကျနေတာပါ။
ဆရာတယောက်က အပျိုကညာမှ ဖွါးမြင်ခြင်းကို if ဖြစ်ခဲ့ရင်လို့ ပြောရင်၊ ဘုရားဂတိ IF တည်ခဲ့ရင်လို့ ပြောရင်၊ နှုတ်ကပတ်တော်ကို မရေရာ မသေချာ IF လို့ ဟောခဲ့ရင်၊ ဘုရားသခင် နှစ်သက်ပါ့မလား။ ဘုရား ဘယ်ကြိုက်မလဲ။ ဘုန်းတော် ထင်ရှားဖို့လည်း မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ တိတိကျကျ တောင်းရမယ်။ မုန့်တောင်းရင် မုန့်ကို မြော်လင့်ပါ။ ကျောက်ကို မပေးဘူး။ ငါးကို တောင်းရင် ငါးကို မြောင်လင့်ပါ။ မြွေ မပေးဘူး။ ဥကိုတောင်းရင် ဥကိုပဲ မြော်လင့်ရမယ်။ ကင်းမြီးကောက် မပေးဘူး။ ဆုတောင်းတာဟာ အဖေနဲ့ သား တောင်းလို့ ရသလိုပါပဲ။
ဒီလိုတောင်းတဲ့အခါ လိုအပ်ချက်လေးတွေ ရှိပါတယ်။
1. အလိုတော် အပြည့်အဝ ဝန်ခံရမယ်။ ပုန်ကန်တတ်သူဟာ ပျော်စရာ၊ အောင်မြင်တဲ့ ဆုတောင်းတဲ့ အသက်တာ မရနိုင်ဘူး။ ဆာလံ ၃၇း ၄ မှာ ….
“ထာဝရဘုရား၌ မွေ့လျော်ခြင်း ရှိလော့။သို့ပြုလျင် စိတ်နှလုံး အလို ပြည့်စုံရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မူမည်။”
ပဌနာတော်မှာ “နာမတော်အား ရိုသေလေးမြတ်ခြင်း ရှိပါစေသော။ ….. အလိုတော်သည် မြေကြီးပေါ်၌ ပြည့်စုံသကဲ့သို့” လို့ စပြီး သင်ပေးပါတယ်။ ဘုရားသခင်ကို ဝန်ခံရမယ်။ ကိုယ်ကိုကိုယ် မပိုင်ဘူး။ ကာရာနီမှာ အသွေးနဲ့ ရွေးဝယ်ထား ခံရသူတွေ ဖြစ်တယ်။ “ဘယ်လို ဆုတောင်းရမလဲ။ သွန်သင်တော်မူပါ။ အလိုတော်ရှိရာကို နားလည်စေပါ။” လို့ နှိမ့်ချမှသာ အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ တိတိကျကျ တောင်းပြီး၊ နေတိုင်း တောင်းတာတွေ ရဖို့ လိုပါတယ်။ တပည့်တော်တွေက “ဆုတောင်းစေခြင်းငှါ …. နည်းပေးတော်မူပါ။” လို့ တောင်းပန်ကြတယ်။ (လုကာ ၁၁း ၁) အလိုတော်နဲ့ညီရင် ဘုရားက ပေးချင်ပါတယ်။
ယာကုပ် ၄း ၂ “သင်တို့သည် …. မရကြ။ အကြောင်းမူကား ဆုမတောင်းဘဲ နေကြ၏။” ဆုတောင်းဖို့ ဘုရားက စောင့်နေတာပါ။ “ဆုတောင်းလျှင်လည်း ကာမဂုဏ် ခံစားစရာဘို့ ရှိစေခြင်းငှါ၊ အလွဲတောင်းသောကြောင့် မရကြ။” ဆိုးညစ်တဲ့ စိတ်နှလုံးက မနှိမ့်ချဘဲ တောင်းမယ်။ တပ်မက်မှုတွေကလည်း ဆုတောင်းကို လွဲသွားစေတယ်။
ယောင်္ကျား ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ မိန်းမက ဆုတောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့စိတ်ထား motives က လွဲနေတယ်။ သူကယ်တင်ခြင်းရရင်တော့ ငါ ပို အဆင်ပြေမယ်။ ဘုရာားကျောင်းလည်း သူက လိုက်ပို့မယ်။ ပိုလည်း ကြင်နာမယ် လို့ မိန်းမက ထင်တယ်။ သူ ဆုတောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘုရားက သူ့ဆုတောင်းကို အဖြေပေးလို့ မရဘူး။ ယောင်္ကျား ကယ်တင်ခြင်းမရခင် မိန်းမရဲ့ စိတ်ထား မှန်ဖို့ လိုနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အများစုရဲ့ ဆုတောင်းတွေကို အဖြေပေးလို့ မရဘူး။ လူမိုက် အားပေး မဖြစ်ဖို့ လိုနေတယ်။ စိတ်နှလုံး ဆက်ကပ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
George C. Stebbins ရဲ့ ဓမ္မသီချင်းစာသားလေးတွေနဲ့ ဆုတောင်းဖို့ လိုပါတယ်။
ကိုယ်တော်ရှင် အိုးထိန်း၊ ကျွန်ုပ် အိုးမြေ။
သဘောတော်ရှိတိုင်း ပုံသွင်း လုပ်ပေ။
ယနေ့ စုံစမ်း၍ စစ်တော်မူပါ။
ရှေ့တော်မှာ နှိမ့်ချ ဒူးထောက်စဉ်ခါ
ခရစ်တော်ဘုရား စိတ်တွင် ကိန်းပါ။
2. အလိုတော်သိဖို့ရာ ကျမ်းစာ နားလည်ရမယ်။ ကျမ်းစာသိမှ အလိုတော်နဲ့ ညီမညီ သိနိုင်မယ်။ သခင်ယေရှုက ….
“သင်တို့သည် ငါ၌တည်၍ ငါ့စကားသည် သင်တို့၌ တည်လျင်၊ သင်တို့သည် တောင်းချင်သမျှကို တောင်း၍ ရကြလိမ့်မည်။” ယော ၁၅း ၇။
ဆုတောင်းခြင်းဟာ ခရစ်တော်၌ တည်နေဖို့ လိုတယ်။ နှုတ်ကပတ်တော်၌ တည်ရမယ်။ ဆာလံ ၁း ၁- ၃ နဲ့ ယောရှု ၁း ၇-၉ မှာ အရာရာမှာ ကောင်းစားဖို့ရာ နှုတ်ကပတ်တော်ကို နေ့ညမပြတ် ဆင်ခြင်ဖို့ လိုတယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဖတ်ရုံသာ မဟုတ်ဘူး။ အထဲမှာ တည်ရမယ်။ မြတ်နိုးရမယ်။ ဆင်ခြင်ရမယ်။ နှုတ်ကပတ်တော်က အသက်တာနဲ့ အတွေးတွေကို ဆေးရောင်းချယ် စေရမယ်။ အဲဒီအခါမှာ ဆုတောင်းလို့ရပြီ။
ဥပမာ၊ ၁ ယော ၁း ၉ ကို ကြည့်ပါ။ “ကိုယ်အပြစ်တို့ကို ဖေါ်ပြတောင်းပန်လျှင်၊ ငါတို့ အပြစ်ရှိသမျှကို လွှတ်၍၊ ဒုစရိုက် ရှိသမျှနှင့် ကင်းစင်စေခြင်းငှါ ဘုရားသခင်သည် သစ္စာတရားနှင့်၎င်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားနှင့်၎င်း ပြည့်စုံတော်မူ၏။” ကိုယ်တောင်းပန်ရင် ဘုရားက ချက်ချင်း ခွင့်လွှတ်ရုံမက အပစ်တွေကို ဆေးကြောပေးတယ်။ နှုတ်ကပတ်တော်မှာ ဂတိပေးထားပါတယ်။ ပဌနာတော်မှာလည်း နေ့စဉ်အစာအတွက် တောင်းခွင့် ပေးထားပါတယ်။ ဒါကို သိရင် တောင်းရုံပါပဲ။ အလိုတော်ရှိရင် လို့ ဆုတောင်းတာက လွဲနေတာပါ။ အလိုတော်က ရှိပြီးသားပါ။
တဖက်မှာလည်း ခရစ်ယာန်ဆိုတာ နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာ တည်ကြည်ရမယ်။ ဝိညာဉ်ရေး စိတ်မဝင်စားဘဲ လောကီစည်းစိမ်ပဲ ခံစားချင်လို့ မရပါဘူး။ “နိုင်ငံတော်နှင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ရှေးဦးစွာ ရှာကြလော့။ နောက်မှ ထိုအရာများကို ထပ်၍ ပေးတော်မူလတံ့။” - မဿဲ ၆း ၃၃။ လောကအရာထက် ဝိညာဉ်ရေး ကောင်းကြီးတွေက ပိုအရေးကြီးတယ် ဆိုတာတော့ သိရမှာပေါ့။
နှုတ်ကပတ်တော် မသိရင် ဘုရားအလိုတော်အတိုင်း ဆုတောင်းဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ကျမ်းစာက ကောင်းတာ၊ မှန်တာ၊ သန့်ရှင်းတာကို ပြတယ်။ နေ့ညမပြတ် ဆင်ခြင်ရမယ်။ ကျမ်းစာမှာ အခြေမခံတဲ့ ဆုတောင်းဟာ ဘုရားနှစ်သက်ဖို့ မလွယ်ဘူး။
3. အလိုတော်အတိုင်း ဆုတောင်းဖို့ ဝိညာဉ်တော် လမ်းပြမှု လိုတယ်။ ဝိညာဉ်တော် လမ်းမပြရင် ဇာတိစိတ်က ကျမ်းစာဖတ်ပေမယ့် နားမလည်ဘူး။ ဘုရားအလိုတော် မသိဘူး။ ဘုရားအလိုတော်က သိစရာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ကျမ်းစာသားတွေလောက်နဲ့ မသိနိုင်ဘူး။ နောက်တပတ် ဘာတရားဟောရမလဲ? ဘယ်သူ့ကို ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်း ပြောရမလဲ? ကားသစ်အတွက် ဆုတောင်းမလား၊ အဟောင်းပဲ ဆက်စီးမလား? သားသမီးတွေကို ဂီတသင်တန်း တက်ခိုင်းရမလား? အလှူငွေကို နိုင်ငံရပ်ခြားကို ပေးပို့ရမလား၊ ကိုယ့်အသင်းတော်ကိုပဲ ပေးရမလား? ဒီနေ့မနက် ဝတ်ပြုခြင်းမှာ ဘယ်ကျမ်းပိုဒ် ဖတ်ရမလဲ? ဒီလုပ်ငန်းသစ်ကို စလုပ်ရင် ကောင်းမလား? မေးခွန်းတွေ ထောင်ချီပြီး ရှိတာပေါ့။ ဒီအခါမှာ ဝိညာဉ်တော်က ဆုတောင်းရာမှာ ကူညီနိုင်တယ်။
“ငါတို့ မတတ်နိုင်သောအရာမှာ ဝိညာဉ်တော်သည် မစတော်မူ၏။ ငါတို့သည် ဆုတောင်းသင့်သည်အတိုင်း အဘယ်ဆုကို တောင်းရမည်ဟု မသိကြ။ သို့ရာတွင် ငါတို့ ဆုတောင်းခြင်းအမှုကို နှုတ်မမြွက်နိုင်သော ညည်းတွားခြင်းအားဖြင့် ဝိညာဉ်တော်သည် စောင့်မတော်မူ၏။ စိတ်နှလုံးကို စစ်တော်မူသောသူသည်လည်း ဝိညာဉ်တော်၏ စိတ်သဘောကို သိတော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား ဝိညာဉ်တော်သည် သန့်ရှင်းသူတို့၏ ဆုတောင်းခြင်းအမှုကို ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့်အညီ စောင့်မတော်မူ၏။” - ရောမ ၈း ၂၆- ၂၇။
ဘာတောင်းရမှန်း မသိတော့ ဝိညာဉ်တော်က ဆုတောင်းပေးတယ်။ အသံမထွက်ဘူး။ ညည်းတွားခြင်းသာ ဖြစ်တယ်။ ဝိညာဉ်တော် ဆုတောင်းပေးရင် ရဖို့ သေချာပြီ။ ကောင်းကင်က စတဲ့ ဆုတောင်းသံဟာ ငြင်းဖို့ ခက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဝိညာဉ်တော်ကို ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာ Comforter လို့ ခေါ်တယ်။ ယော ၁၄း ၁၆၊ ၂၆။ ယော ၁၅း ၂၆။ ယော ၁၆း ၇) ဒါက ဂရိစကား parakletos လက်တွဲဖေါ် ( one called alongside ) လို့ ဆိုလိုတယ်။ အတူအမြဲ ရှိတယ်။ ယော ၁၄း ၁၇ မှာ “ထိုဝိညာဉ်တော်သည် သင်တို့နှင့်အတူ dwell with တည်နေ၍၊ သင်တို့၌ shall be in you ရှိတော်မူသောကြောင့် သင်တို့ သိရကြ၏။” ထမြောင်ခြင်း မတိုင်မှီ ဝိညာဉ်တော်က တမန်တော်တွေနဲ့ dwell with အတူနေတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘုန်းထင်ရှားပြီးနောက် ယုံကြည်သူရဲ့ be within us အထဲမှာ နေမယ်။ သခင်ယေရှု ထမြောက်ပြီးနောက် “သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကို ခံယူကြလော့။” လို့ မှုတ်သွင်းလိုက်တယ်။ (ယော ၂၀း ၂၂) အဲဒီအချိန်ကစပြီး ယုံကြည်သူတိုင်းရဲ့ အထဲမှာ ဝိညာဉ်တော် ရှိနေတယ်။ ရောမ ၈း ၉ က “သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်သည် သင်တို့အထဲ၌ ကျိန်းဝပ်တော်မူလျှင်၊ သင်တို့သည် ဇာတိပကတိဘက်၌ ရှိကြသည် မဟုတ်။ ဝိညာဉ်ပကတိဘက်၌ ရှိကြ၏။ ခရစ်တော်၏ ဝိညာဉ်ကို မရသောသူမည်သည်ကား ခရစ်တော်နှင့် မဆိုင်။” ၁ ကော ၆း ၁၉- ၂၀ မှာ “အဘယ်သို့နည်း။ သင်တို့ ကိုယ်ခန္ဓာသည် ဘုရားသခင် ပေးသနားတော်မူသော ဝိညာဉ်တော် တည်းဟူသော၊ သင်တို့ အထဲ၌ ကျိန်းဝပ်၍ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ဗိမာန်ဖြစ်ကြောင်းကို၎င်း၊ မိမိတို့ကို မိမိတို့ မပိုင်ကြောင်းကို၎င်း မသိကြသလော။ သင်တို့သည် အဘိုးနှင့် ဝယ်တော်မူသောသူ ဖြစ်သောကြောင့်၊ ဘုရားသခင် ပိုင်တော်မူသော သင်တို့၏ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်တော်ကို ထင်ရှားစေကြလော့။”
သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဟာ ခရစ်တော်ရဲ့ ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ ရောမ ၈း ၉။ ကားတိုင် မတိုင်ခင်မှာ ကြေကွဲနေတဲ့ တပည့်တော်တွေကို “ငါသည် သင်တို့ကို မိဘမဲ့ ဖြစ်စေခြင်းငှါ စွန့်ပစ်မည် မဟုတ်။ သင်တို့ဆီသို့ လာဦးမည်။” - ယော ၁၄း ၁၈။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ကြွလာမယ်လို့ ရှင်းပြတယ်။ ယော ၁၄း ၂၆ မှာ .. “ခမည်းတော်သည် ငါ့အတွက်ကြောင့် စေလွှတ်တော်မူသော ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာတည်းဟူသော သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် သင်တို့အား ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ပြသသွန်သင်တော်မူ၍၊ ငါပြောခဲ့သမျှသော စကားတို့ကို မှတ်မိသောဥာဏ်ကို သင်တို့အား ပေးတော်မူ၏။”
ဒါကြောင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်က ခရစ်တော်ရဲ့ အလိုတော်ကို နားလည်စေပြီး၊ ခရစ်တော်စကားကို မှတ်မိစေတယ်။ ဆက်ကပ်သူဟာ နှုတ်ကပတ်တော် ဆင်ခြင်ချင်လာမယ်။ အလိုတော် သိလာမယ်။ ဝိညာဉ်တော်က လမ်းပြလာမယ်။ ဘုရားနှစ်သက်တဲ့ ဆုတောင်းခြင်း ဖြစ်လာမယ်။ ဘုန်းထင်ရှားဖို့၊ ကောင်းစားဖို့၊ ပျော်ရွှင်ရဖို့ တောင်းစေချင်တာကို စိတ်နှလုံးထဲ သွန်းလောင်းပေးလိမ့်မယ်။ ဒါဆို ရပြီပေါ့။
ဝိညာဉ်တော်ဟာ ခရစ်တော်ရဲ့ ကိုယ်စားဖြစ်တဲ့အတွက် ဝိညာဉ်တော်လမ်းပြတဲ့အတိုင်း ဆုတောင်းသူသာ ခရစ်တော် နာမ၌ လို့ ရိုးသားစွာ ဆုတောင်းနိုင်ပါတယ်။
သခင်ယေရှု နာမ၌ လို့ ရိုးသားစွာ ဆုတောင်းသူဟာ အဖြေရမှာပါ။ ယော ၁၄း ၁၃- ၁၄ မှာ “သင်တို့သည် ငါ၏နာမကို အမှီပြုလျက် ဆုတောင်းသမျှအတိုင်း ငါပြုမည်။ အကြောင်းမူကား ခမည်းတော်သည် သားတော်အားဖြင့် ဘုန်းထင်ရှားတော်မူခြင်း ရှိမည့်အကြောင်းတည်း။ သင်တို့သည် ငါ၏နာမကို အမှီပြု၍ တစုံတခုသော ANY THING ဆုကို တောင်းလျင်၊ တောင်းသည့်အတိုင်း ငါပြုမည်။” ရှင်းပါတယ်။ သခင်ယေရှု နာမ၌ တောင်းရင် ကောင်းကင်အောက်က ဘယ်အရာမဆို ရနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လူတွေက ဘုရားကို ညာတယ်။ သခင်ယေရှု နာမ၌ ဆိုပေမယ့် သခင်ယေရှုရဲ့ အလိုအတိုင်း ဖြစ်ရဲ့လား? မဖြစ်တတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း မရကြတာပါ။
ဒါကြောင့် အလိုတော်ရှာ၊ ကျမ်းစာဖတ်၊ ဝိညာဉ်တော် လမ်းပြမှု ခံယူဆိုတဲ့ အချက် ၃ ချက်နဲ့ ညီရင် ဆုတောင်းဖို့ အသင့်ဖြစ်ပါပြီ။
လိုချင်တဲ့အချက်တွေကို သေသေချာချာ စီစစ်လိုက်တော့။ ကိုယ်အလိုလား? ကျမ်းစာနဲ့အညီလား? ဝိညာဉ်တော် လမ်းပြရဲ့လား? ဒီအချက်တွေ ညီရင် ကောင်းကင်ကို မြော်ရင်း ယာကုပ်လို ရဲရဲ ဆုတောင်းလိုက်ပါ။ “ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ကို ကောင်းကြီးမပေးလျှင်၊ မသွားရဟု ဆို၏။” - ကမ္ဘာ ၃၂း ၂၆
ဒါကို သိပြီဆိုရင် လက်တွေ့ ဆုတောင်းလိုက်ပါ။ တိကျကျ တောင်းပါ။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း တောင်းသွားပါ။ မြော်လင့်ချက်နဲ့ ရသည်အထိ တောင်းပါ။
“သင်တို့သည် ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်း စုံလင်စေခြင်းငှါ တောင်းကြလော့။ ထိုသို့ တောင်းလျှင် ရကြလိမ့်မည်။” - ယော ၁၆း ၂၄။
ကိုယ်တောင်းတာ မရရင် ဘာမှားနေလဲ ရှာပါ။ တောင်းတာမရဘဲ အဖြေရပြီလို့ မပြောပါနဲ့။ ဆုတောင်းချက်ကို ပြောင်းရင် ပြောင်း၊ (သို့) အဆီးအတားဖြစ်နေတဲ့ အပြစ်ကို ပြုပြင်ပါ။ အမှားအယွင်း မရှိရင်တော့ ရအောင် တောင်းဖို့ပဲ လိုပါတော့တယ်။